Waxaa jira xeel-dheel si aad u ilaaliso boorsooyinkaaga magaca-weyn - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > Warka Warshadaha > Waxaa jira xirfad lagu ilaaliyo boorsooyinkaaga magaca weyn leh
Waxaa jira xirfad lagu ilaaliyo boorsooyinkaaga magaca weyn leh
Qalab kala duwan, fadlan "qor dawada saxda ah" dayactirka
Boorsooyinka maqaarka ee dhifka ah sida maqaarka yaxaaska, maqaarka gorayada, maqaarka qorraxda, iwm. Waxay u baahan yihiin in dusha sare lagu nadiifiyo tuwaal qallalan, ka dibna si khafiif ah loo mariyo lakab maqaar dhalaalaya si kor loogu qaado iftiinka dusha maqaarka. Haddii ay ka samaysan tahay waxyaabo qaas ah sida suede, suede, iyo dhogor, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho burush timo xayawaan jilicsan si aad tartiib ugu xaaqdo dusha shandada gacanta. Waxyaabaha kor lagu soo sheegay ma sahlana in la daryeelo, markaa iskuday inaad iska ilaaliso inaad ku dhegto cunno adag ama rinji; iyo cudbi, maro iyo waxyaabo kale oo si fudud wasakh u ah, fadlan xusuusnow inaadan isticmaalin burush si aad u nadiifiso, taas oo ay fududahay in laga tago calaamadaha iyo wasakhda, kuna tirtir tuwaal nadiif ah oo qoyan U daa si dabiici ah. Waa lagama maarmaan in la qoro daawada saxda ah si boorsooyinka gacanta looga dhigo kuwo daryeel iyo daryeel leh.
Joogtee "qaabka hore ee jirka" ee boorsada gacanta
Haddii ay tahay shandad gacan saddex-geesood ah ama xajin qalab jilicsan, ma "tuuri kartid" qolka dhaw sidaad doontid. Sida loo keydiyo loona dhigo boorsooyinka gacmaha waa cilmi. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay laba "farshaxan": bacaha boodhka ah iyo kubbadaha waraaqaha la jeexjeexay. Shandadaha gacmeed ee qaabaysan waxay u baahan yihiin in lagu rido waraaqo la jeexjeexay si loo ilaaliyo "qaabka jirkooda". Nadaafadda aasaasiga ah ka dib, fadlan ku duub bac aan carro-caddeyn karin (fadlan ha ku keydin bacda maqaarka ee bacaha balaastigga ah), ugu dambeynna ku rid hawo iyo meel cayiman Golaha wasiirrada. Ku daawee shandadaha jilicsan iyo kuwa aan muuqan madmadow la'aan. Isku day inaadan ku qasin boorsooyinka gacmeed ee ka samaysan alaabada jilicsan sida maqaarka nambarka iyo maqaarka jilicsan oo leh waxyaabo fiiqan. Ku laallaada ama ku laalaada sanduuqa wax lagu keydiyo waa xulasho wanaagsan. Haddii aad aragto in boorsada gacmuhu ay leedahay ciriiri ama duuduub, duub timo qallaji qalab yar oo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah.
Boorsooyinka gacmaha ka dhig kuwo dhalaalaya oo aan sii idlaanin
Immisa boorsooyin ayaa nagu soo jiita midabbada quruxda badan, markaa aad ayey muhiim u tahay in la ilaaliyo "muuqaalkooda". Dambiga ugu weyn ee boorsooyinka gacmaha ka sii libdha waa qorrax soo baxa. Meesha boorsada gacanta la dhigaa waa in hadh iyo hawo la yeeshaa. Marka labaad, fadlan isticmaal buufiska buuqa si aad si joogto ah u masaxdo. Marka aadan soo laaban, waxaad codsan kartaa caano ama glycerin si aad u ilaaliso midabka. Sida maqaarka patent-ka, boorsooyinka gacmaha midabkoodu fudud yahay ee wasakhda fudud leh, fadlan iskuday inaad iska ilaaliso inaad kudarsato dhar si fudud u libdhi kara ama dareeraha kiimikada.
Weligaa ha sii daynin dahaadhka boorsada gacanta
Maalmahan, boorsooyin gacmeedyo badan oo raaxo leh ayaa lagu dhajiyay waxyaabo qaali ah sida maqaar buuxa ama xitaa maqaar yaxaas, markaa fadlan ha iloobin dayactirka dahaadhka. Waxyaabaha la isku qurxiyo ama cuntada ku jirta bacda waa in la xidho. Haddii aad si kama 'ah u daadato, waxay dhaawici doontaa dhammaan dahaadhka; waxaa fiican in qalin la xiro halkii aad ka riixi lahayd qalinka markii aad qalinka saareyso, si aan "ugu garaacin" dahaarka qalinka ka dib marka la cadaadiyo. . Ugu dambeyn, fadlan iskuday inaad iska ilaaliso inaad dhigto walxaha fiiqan si aadan u xoqin dahaadhka, si boorsada gacantu ay "ugu ekaato mid gudaha iyo dibedda ah."
Ka yeel qalabka kaabayaasha dhaadheer oo dhalaalaya
Qalabka qalabka ee bacaha magaca weyn ayaa markii hore loogu talagalay in lagu yareeyo xoqitaanka maqaarka geeska. Sanadihii la soo dhaafay, waxay si tartiib tartiib ah ugu xuubsiibteen qayb ka mid ah naqshadeynta boorsada gacmaha. Xirmooyinka qalabka ayaa daxalaystay ama saameyn ku yeeshay muuqaalka, markaa xusuusnow inaad si joogto ah u masaxdo. Ka dib marka shandada gacanta ay gaadho roobka, ku tirtir tuwaal qalalan wakhtiga; haddii waxoogaa oksijiin ah ama daxalaystay, waxaad si tartiib ah ugu tirtiri kartaa cadayga ama bur. Intaas waxaa sii dheer, iska ilaali shilalka walxaha fiiqan marka aad isticmaaleyso boorsooyinka gacmaha si aad uga fogaato xoqitaanka qalabka qalabka.
Dayactirka joogtada ah ayaa ugu muhiimsan
Marka hore walxaha culus boorsada ha dhigin, hadii kale boorsada ayaa luminaysa qaabkeedii hore mudo kadib. Midda labaad waa in fiiro gaar ah loo yeesho dayactirka gacanta. Taabashada joogtada ah ee gacanta waxay ka dhigeysaa gacan qabashada mid aad u fudud in la xidho oo lagu ururiyo wasakh. Calaacalahaaga nadiif ha ahaato markaad boorsada sidato, ama ku dheji masar xariir ah dusha gacanta si nadiifku u ilaaliyo Ta saddexaad, haddii wasakhda lagu dhejiyo, waa in isla markiiba la daaweeyaa. Dawada ilkaha, aalkolada ama saabuunta lagu nadiifiyo ayaa loo isticmaali karaa in si ku meel gaadh ah loogu daaweeyo qashinka. Dabcan, inaad si joogto ah u ilaaliso qaar ka mid ah buufinta boorsada gacmaha ee daryeelka ama saliida dayactirka waa boqorka.
Boorsooyinka gacantu sidoo kale ha ku raaxaystaan ​​dayactirka xirfadeed
Shandadaha caadiga ah ee noocyada waaweyn leh ee maqaarka dhifka ah, illaa inta si habboon loo dayactiray, ma aha oo keliya in la qaado inta uu nool yahay ama xitaa loo gudbin karo jiilka dambe. Badi noocyada raaxada waxay bixiyaan dayactir aasaasi ah oo bilaash ah oo loogu talagalay boorsooyinkooda. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale u qaadan kartaa boorsadaada dukaanka dayactirka maqaarka ee xirfadleyda ah dayactir aad u fara badan oo dhameystiran. Farsamooyinka xirfadeed iyo alaabooyinka dayactirka ma hagaajin karaan oo keliya dhibaatooyinka adag sida xirashada, xoqitaanka, iyo yaraanshaha, laakiin sidoo kale waxay sameyn karaan boorsooyinka gacanta Saliidaha dabiiciga ah ee sii dhacaya ayaa la dayactiray, iyagoo si weyn u dheereynaya nolosha boorsada. Marka maxaad sugeysaa, aad "dukaanka 4S" ee ku yaal warshadaha boorsada si aad ugu sameysid qurux "boorsooyin" boorsooyinkaaga!
Hore:Waxaan kugula talineynaa darajooyinka ugu caansan boorsooyinka hooyada